Mozika sy dihy Dangdut ao Singapaoro ary ireo rehetra mikasika ny trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2019 5:51 GMT
Singapaoro , toerana iray tsara hitrandrahana ireo kanto avy amin'ny manerana an'i Azia Atsimo-Atsinanana manontolo. Nentin'ny blaogera iray ao amin'ny licencetospill tany amin'ny klioba Dangdut (DD) iray ireo namany sasantsasany. Ny Dangdut dia endrika mozika avy any Indonezia. Manazava ilay blaogera hoe:
ny tononkira kitoatoa no tena mahasamihafa ny hira DD sy ny hira indoneziana hafa. Ahitana fitiavana tafahoatra sy mahavaky fo ao anatiny. Filazàna “hati” marobe (fo) sy “sayanggggg” (tiaaaa) anyy anatin'ireo andalana. Betsaka tahapeo toy ny hoe “auu auuuu auuuu”, “aduhhhh aduhhh aduhhhh”, “degappp deguppp deguppp”, ireo rehetra ireo dia mba hanehoana ny feon'ny fo iray midobodoboka. wakakaka!
Jereonareo ny lahatsoratra ho ana lahatsary iray izay mampiseho ireo fihetsika mifanaraka amin'ny dangdut:
amin'izao fotoana izao, ahoana no hanaovanao fihetsika iray mety amin'ny DD? Hoy aho mantsy azy ireo hoe azony atomboka amin'ny alalan'ny fanaovana hetsika miadana amin'ireo tanan-dry zareo. Rehefa vitan-dry zareo izay, hetsehina mankany aloha sy aoriana ireo soroka. Avy eo, atongilana miaka-midina amin'ny gadona ireo soroka. dia tadaaaa, hetsika DD tsotsotra ho anao !
Tsy ny dihy rehetra anefa izany. Liana ny hahalala ny kolontsaina Sikh, nisy miozolomana singapaoreàna iray nitsidika Gurudwara iray – fiangonana Sikh sady, mifanohitra amin'izay efa tahiry efa azy taloha, nahazo fandraisana mafana izy.
Ivelan'i Singapaoro manokana, Peishan, Singapaoreàna iray monina ao Chicago no manontany tena raha toa tena tanindrazany marina i Singapaoro:
Ahoana no hilazàna amin'ireo ray amandreniko hoe tsy tanindrazako intsony fa i Singapaoro ? Izao no tiako hambara, eny, avy any izy ireo, lehibe tany aho, tany no nitaizan'izy ireo ahy, saingy ahoana no hiantsoanao ho tanindrazana ny toerana iray izay tsy niainanao akory nandritra ireo taona maro sady tsy irianao akory ny hivelona ao aminy amin'ireo taona ho avy?
Voatsikera be tokoa ilay hafatra ary avy amin'ireo olona malahelo ny tanindrazany ireo valiny -
Singapaoro io amiko. Amin'izao fotoana izao. Eto Michigan, tsy manana namana firy aho, tsy manana fianakaviana, tsy manan-trano, tsy manana tanindrazana, tsy misy fahatsiarovan-tena ho tafiditra anaty fiarahamonina, tsy misy fahatsiarovana maro, tsy misy ifamatorako. Hamboariko ny valiziko ary hiainga tsy hahatsiaro ho meloka aho na nenina, raha vao vita ny fianarana. Saingy mazava ho azy, tsy midika akory izany fa tsy hahatsiaro azy tsindraindray aho aorian'izao.
sy ity iray ity avy amin'i Kevin:
Ho ahy tsy mampaninona ahy ny miaina na aiza na aiza eran'izao tontolo izao, raha mbola misy ny fifandraisana aterineto (matotra aho miteny an'izany!) Manana iray tampo roa aho ary ireo ray amandreniko dia mamporisika ahy handeha lavitra araka izay tratra (mikasika ny asako, tsy akaikikaiky araka ny fiteny!). Tsy maintsy manaiky aho anefa, fa ny fanapahankevitro handeha na aiza na aiza dia voafetra ho amin'izay toerana azon'ilay sila-panahiko aleha, izay zavatra iray hajaiko tanteraka. Na dia malahelo ny sakafo singapaoreàna sy ireo namako ary ny fianakaviako aza aho (tsy misy filaharany manokana!). Afaka miaina amin'ny fiheverana fa ny Aterineto dia manome ahy traikefa iray voafetra mikasika ny any an-tanindrazana. Raha ny marina, heveriko fa tsara foana ny mahita kolontsaina vaovao ary mianatra zavatra avy amin'izy ireny.
Mitatitra i Budak fa natory ilay zanaka colugo noratrain'ireo mpihaza biby roa herinandro lasa izay. Nitsahatra tsy nisakafo izy ary niha-osa. Biby mampinono monina any anaty ala ny culogo ary manidina, hita any Azia Atsimo-Atsinanana. Nandray an-tànana ilay biby naratra sy nanao izay azony natao mba hitsaboana azy ireo mpilatsaka antsitrapo mpiaro ny natiora.
Faranantsika ao anaty fasana iray. Nandehandeha teny am-pasana ny vondron'ireo mpankafy zavamiafina. (rohy tapaka) tsy nahita zava-mahagaga izy ireo saingy nahita zavatra mahaliana vitsivitsy tsy dia misy dikany ara-tantara.
Ary somary lavidavitra, tery an-tsisin'ilay fasana, voafonon'ny hazo franzipanie goavana iray no sady toa voahidy tao anatina rindrina kely vita biriky , faty 14 no hita tao, an'ireo Geishas izay nonina nandritra ny faran'ny taonjato faha-19 tao Singapaoro. Ny antitra indrindra, dia maty tamin'ny 1899, niasa tao Malay Road (fihaonan-dalana an'i Bugis ankehitriny, izay vondrom-piarahamonina japoney niroborobo tamin'izany fotoana).
19 ora izayFilipina